सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स लिन चाहनेहरुले एकपटक अवस्य पढ्नुहोला ! – Sandesh Press
सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स लिन चाहनेहरुले एकपटक अवस्य पढ्नुहोला !
December 15, 2020 165
सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स लिन चाहनेहरुले एकपटक अवस्य पढ्नुहोला ! काठमाडौं – नयाँ सवारी चालक अनुमतिपत्र अझै दुई महिना नखुल्ने भएको छ । झण्डै नौ महिनादेखि बन्द रहेको सेवा तत्काल खुलाउँदा धेरै सेवाग्राहीको भीड लाग्ने र सङ्क्रमण फैलनसक्ने भनी तत्काल नखुलाउने गरी छलफल अघि बढेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँगको छलफलमा तत्काल खुलाउन नहुने भनी अझै केही महिना रोक्ने गरी योजना बनाइएको विभागका प्रवक्ता डा लोकनाथ भुसालले बताए । *** पूरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य सामान्यरुपमा घटेको छ । आइतबार स्थिर रहेको सुन सोमबार प्रतितोला १ सय रुपैयाँले घटेको थियो । मंगलबार पनि सुन प्रतितोला १ सय रुपैयाँले नै घटेको छ । सोमबार प्रतितोला १ सय रुपैयाँले घटेको थियो । मंगलबार पनि सुन प्रतितोला १ सय रुपैयाँले नै घटेको छ
गत हप्ता आइतबार २ सयले घटेको थियो । सोमबार १ सयले घटेको थियो । मंगलबार १ हजार ५ सयले बढेर प्रतितोला ९४ हजार १०० मा कारोबार भएको सुन बुधबार १ हजार ६ सयले घटेको थियो । यस्तै विहिबार ९ सय रुपैयाँले घटेको थियो । शुक्रबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको थियो । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाला सुनको मूल्य ९२ हजार ३०० सय र तेजाबी सुनको मूल्य ९१ हजार ८५० कायम रहेको छ । चाँदीको मूल्य भने आज स्थिर छ । चाँदी आज प्रतितोला १ हजार २०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
Prevकाठमाडौमा जारी जोर बिजोर प्रणालीवारे यस्तो निर्णय हुँदै
Nextलाखौं पुगेको सुनको मुल्य आज भने सोच्नै नसकिने गरि ह्वात्तै घट्यो
रामकुमारीको जिम्मा लिइदिन योगेशलाई प्रहरीको आग्रह, नेता भट्टराईले जिम्मा लिन मानेनन्
चिनियाँ रक्षामन्त्रीलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगेका नेपाल पक्राउ
ब्राजिलमा कोरोना भाइरसबाट एकैदिन चार हजार भन्दा बढीको मृत्यु
धन लाभ हुनुअघि मिल्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी हेर्नुहोस (3176)
यहा सम्म आइसकेपछी नपढी तल नसार्नुहोला,नत्र ठुलो पछुतो हुनेछ (2913)
स्कूल बसवाट खसेर ६ कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीको घटनास्थलमै मृत्यु (1524)
झापाको बिर्तामोडकी यी महिला जसले ठगिन् एक करोड ! (1000)